BKF Qalabka Dayactirka. BKF Soo kabashada Software.
DataNumen BKF Repair waa ugu fiican BKF qalab kabashada adduunka. Waxay hagaajin kartaa musuqmaasuqa BKF faylasha iyo dib u soo kabashada inta ugu badan ee xogtaada ee suurtogalka ah, taas oo yareyneysa luminta musuqmaasuqa faylka.
4.90 / 5 (laga bilaabo 1,649 cod)
maxaad DataNumen BKF Repair?
Heerka soo-kabashada waa most shuruudaha muhiimka ah ee a BKF soo kabashada. Iyada oo ku saleysan tijaabooyinkayaga dhameystiran, DataNumen BKF Repair leeyahay heerka ugu wanaagsan ee soo kabashada, oo la mid ah Soo-kabashada loogu talagalay Kaabashada, oo ka fiican tartamayaasha kale ee suuqa ku jira! Sida qiimaha DataNumen BKF Repair aad uga raqiisan yahay soo-kabashada loogu talagalay kaabta, wax soo saarkeenna DataNumen BKF Repair wuxuu leeyahay saamiga ugu fiican / waxqabadka.
Baro wax badan oo ku saabsan sida DataNumen BKF Repair sigaar cabaya tartanka
Cable Shaybaarada Teknolojiyada
Noocyada Muhiimka ah ee DataNumen BKF Repair v3.4
Taageero lagu dayactirayo BKF faylasha lagu abuuray Windows 95, 98, ME, NT, 2000, XP iyo Server 2003 kaydadka korantada.
Taageero lagu dayactirayo BKF faylasha lagu abuuray dhammaan noocyada Veritas Backup Exec, oo ka hooseeya Windows NT, Windows Server, Netware, OS / 2 ama Macintosh.
Taageero soo kabashada xogta, mugga, qaab dhismeedka galka iyo faylalka ku jira BKF keyd
Taageero si aad uga soo kabato cadaadis BKF diiwaanada
Taageero lagu dayactirayo BKF faylasha ku jira warbaahinta khaldan, sida diskiga diskiga, Zip saxannada, CDROM-yada, iwm.
Taageero si loo dayactiro qayb ka mid ah BKF files.
Taageerada inay ka soo kabato xog-ururin iyo mug badan BKF diiwaanada
Taageero lagu dayactirayo BKF faylasha sida ugu ballaaran ee 16777216 TB (ie 17179869184 GB).
Majiro maamule maamuleed looga baahan yahay inuu soo celiyo BKF files.
Taageero si loo helo oo loo xusho BKF faylasha lagu hagaajinayo kombiyuutarka deegaanka.
Taageerada isdhexgalka ee Windows Explorer, markaa waad dayactiri kartaa a BKF ku fayl garee liiska macnaha guud ee Windows Explorer si fudud.
Isticmaalka DataNumen BKF Repair inuu ka soo kabsado Musuqmaasuq BKF files
Marka aad BKF faylasha waa la musuqmaasuqay ama la dhaawacay sababo kala duwan awgood oo si sax ah uma soo celin kartid, waad isticmaali kartaa DataNumen BKF Repair si loo baaro BKF faylasha iyo soo kabsado xogta ugu badan iyaga intii suurto gal ah.
Fiiro gaar ah: Kahor intaadan soo kaban wixii musuq ama waxyeelo ah BKF Fadlan la soco DataNumen BKF Repair, fadlan xir Microsoft Utility Utility iyo wixii kale ee codsiyo ah ee wax ka beddeli kara BKF gudbiso.
Xulo musuqmaasuqa ama waxyeellada BKF faylka la dayactirayo:
Waad ku dari kartaa BKF si toos ah magaca faylka ama guji kan badhanka si aad u caleenta u xulato feylka.
Marka la eego, DataNumen BKF Repair soo celin doonaa waxyaabaha ku jira BKF faylka ku keydi oo ku keydi galka xxxx_recovered, halkaasoo xxxx ay tahay isha BKF Magaca faylka. Tusaale ahaan, faylka MyBackup.bkf , galka wax soo saarka ee caadiga ah wuxuu noqon doonaa MyBackup_recovered. Haddii aad rabto inaad isticmaasho magac kale, markaa fadlan dooro ama u dhig si waafaqsan:
Click ah batoonka, iyo DataNumen BKF Repair doonaa start iskaanka iyo hagaajinta isha BKF faylka. Bar horumarka
Nidaamka dayactirka ka dib, haddii isha laga helo BKF faylka si guul leh ayaa loo dayactiri karaa, waxaad arki doontaa sanduuqa farriinta sidan oo kale:
Hadda waxaad furi kartaa galka MyBackup_recovered oo ay ku jiraan dhammaan waxyaabaha la soo helay ee ku jira BKF gudbiso.
DataNumen BKF Repair 3.4 waxaa la sii daayay May 4, 2021
DataNumen BKF Repair 2.9 waxaa la sii daayay Diseembar 18, 2020
DataNumen BKF Repair 2.7 waxaa la sii daayay Nofeembar 4th, 2020
DataNumen BKF Repair 2.6 waxaa la sii daayay Nofeembar 18th, 2019
DataNumen BKF Repair 2.5 waxaa la sii daayay Maajo 16th, 2019
Taageero si aad uga soo kabato cadaadis BKF files.
DataNumen BKF Repair 2.2 waxaa la sii daayay 17 Ogosto, 2013
Hagaajinta iswaafajinta nidaamka cusub ee hawlgalka Windows 7 iyo 8.
DataNumen BKF Repair 2.1 waxaa la sii daayaa 1da Diseembar, 2010
Hagaajinta adeegsiga GUI.
DataNumen BKF Repair 2.0 waxaa la sii daayay 2-dii Abriil, 2009
Dib u qor arjiga oo dhan iyo mashiinka dayactirka.
Dayactir cilladaha ka shaqeynaya magacyada faylka.
DataNumen BKF Repair 1.2 waxaa la sii daayay Luulyo 5th, 2006
DataNumen BKF Repair 1.0 waxaa la sii daayay 16 Juunyo 2005
Qalab awood leh oo lagu soo kabsado kaydinta Microsoft ee musuqmaasuqa ah (BKF) faylasha